ဒီလို အဖြစ်မျိုး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိမ်မှာ ဖြစ်ဖူးပါသလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဒီလို အဖြစ်မျိုး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိမ်မှာ ဖြစ်ဖူးပါသလား
ဒီလို အဖြစ်မျိုး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အိမ်မှာ ဖြစ်ဖူးပါသလား
Posted by Mr WorldWide on Jun 24, 2013 in Creative Writing, Think Different | 26 comments
ပန်းသီး ( ဒါမှမဟုတ် ) ပေါင်မုန့် ၊ ကိတ်မုန့် တွေကို စားဖို့ စားပွဲပေါ်မှာ တင်ထားတယ်။ လူတွေကလည်း စားပွဲနားမှာ ထိုင်နေကြတယ်။ သိပ်မကြာဘူး စားပွဲပေါ်က တင်ထားတဲ့ ဟာတွေ အကုန်ကုန်သွားလေရော။ ဒါဟာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။ ဘယ်သူမှ မဆာကြပေမယ့် သူတို့အားလုံး စားပစ်လိုက်ကြတယ်။ ပန်းသီး ( သို့မဟုတ် ) ကိတ်မုန့်က စားပွဲပေါ်မှာ ရှိနေတာကိုး။
နောက်ထပ် အဖြစ်မျိုး ခင်ဗျား ဒီလို ဖြစ်ဖူးပါသလား
လစာငွေထုတ်လာတယ်။ သိပ်မကြာလိုက်ဘူး ပိုက်ဆံတွေ ပြောင်ပါလေရော။ တကယ် သုံးစရာ မလိုပေမယ့်လည်း သုံးလိုက်မိတယ်။ ဒါလည်း ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ပိုက်ဆံက ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ရှိနေတာကိုး။
တကယ်လို့များ ခင်ဗျားဟာ ကိတ်မုန့်ကို မနက်ဖြန်အတွက် ချန်ထားချင်တယ်ဆိုရင် စားပွဲပေါ် မတင်ခင် ပထမဆုံး တချို့တ၀က် လှီးထားပြီး ဘယ်သူမှ လက်နဲ့ မတို့နိင်ခင် ရေခဲသေတ္တာထဲ သိမ်းထားခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ လခထုတ်လာတဲ့ ပိုက်ဆံ အားလုံးကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ မထည့်ထားပဲ စုထား ၊ သိမ်းထားခဲ့မယ် ဆိုရင်။
ဒါဟာ လွယ်ကူတဲ့ နည်းဗျုဟာ တစ်ခုပါ
ကျွန်တော် ၀င်ငွေနည်းနည်းပဲ ရတယ်လို့ ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့ ။ နည်းနည်းစရ နည်းနည်း စစု။ နောက်တော့ များများ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူတော်တော် များများ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှာနိင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ချို့သာ ပိုက်ဆံ အများကြီး စုနိင်တယ်။ “ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရတဲ့ အခါစုမယ် ” လို့ သင်က ပြောရင် စုဖြစ်ချင်မှ စုဖြစ်တော့မယ်။ ငွေစုတဲ့ အကျင့်ကို အခုချိန်ကစပါ။
“ ချမ်းသာတဲ့ လူနဲ့ ဆင်းရဲ့တဲ့လူ ကွာခြားတာက ဆင်းရဲ့တဲ့လူတွေက သုံးပြီးမှ ကျန်တာကို စုကြတယ်။ ချမ်းသာတဲ့ လူတွေက ဦးစွာ စုဆောင်းပြီးမှ သုံးကြတယ် ”
ကျွန်တော်တို့ နိူင်ငံသားအများစုအတွက် အင်မတန် အသုံးတဲ့ မဲ့နည်းတွေပါပဲ
ဒါမျိုးတွေ များများရေးပေးပါ မောင်ခိုင်မာရေ
မန်းကီးကတော့ ထုတ်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြောင်တာပဲ …
ဒီစကားတွေ မှတ်ထားလိုက်တယ်ဗျာ …
သစ်ပင်ဖြောင့်တော့ တက်ရတော့ အခက်သား ….
ကြိုးစားပြီး တက်ရမှာပါ့ …
ကျမ တို့ GM က မင်းတို့ ငွေစုချင်ရင်
Want ….လိုချင်တာတွေ မ၀ယ်ပါနဲ့…
Need…..လိုအပ်တာတွေကိုသာ ၀ယ်ပါတဲ့ လေ…
ဆရာပြောတဲ့… စုဆောင်းပြီးမှ သုံးကြတယ်… ဆိုတာလေး ကြိုက်တယ် …
စု မယ် ။
စုထားတာ များရင် မုန့် တွေ ဝယ်စား မယ်
ကျုပ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နယ်ကလာပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်တော့ အဆောင်သားတွေထဲမှာ မိဘကလစဉ်ပေးတဲ့ထဲမှာ အနည်းဆုံး..။
ဒါပေမယ့် – အဆောင်သားတွေထဲမှာ လက်ထဲ ငွေအရှိဆုံး၊ အရေးပေါ်သုံးဖို့ အမြဲအသင့်အရှိဆုံး..။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဆောင်ကြေး+ကျောင်းလခ သွင်းပြီးရင် ကျန်တဲ့ငွေကို ခွဲတမ်းချပြီး
အိပ်ကပ်ထဲမှာ သုံးရက်တစ်ခါ သုံးရက်စာပဲထည့်ထားတယ်။
အချိန်မတိုင်ခင်ကုန်ရင် ထပ်မထုတ်ပဲ တစ်ပြားမှမသုံးပဲနေတယ်…။
လူတော်တွေကို သူများက စည်းကမ်းချပေးစရာကိုမလိုဘူး…
လူတော်တွေက သူ့စည်းကမ်း သူချ တာ။
ကျနော်က ကိုယ်သုံးရတဲ့ ပိုက်ဆံကမှ ကိုယ့်ပိုက်ဆံပဲ။
စုပြီး မသုံးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံက မတန်ဘူးးးးး
အဲဒီတော့ ကျနော့ အတွေး ကတော့…..
ကိုယ်ရှာနိုင်သလောက်ပဲ ကိုယ်သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်တာပါပဲ။
ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီး ဒါလေးကို သတိရသွားတယ်။
“ စု နိုင် မှ ချမ်း သာ မယ် ´´
စုလို့မဟုတ် ၊ ၀င်ငွေကောင်းအောင် ၀ိရိယစိုက်အလုပ်လုပ်လို့ဟုမြင်ဂျောင်း…
ဒီနည်းလေးတွေကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့ နီးစပ်ရာကို ပြန်ပွားရမယ်……
လက်ရှိ ကျုပ်ပိုက်ဆံ စုတဲ့နည်းကတော့ တစ်ရက် ၁ ဂျပ်ဗျာ…….
ရက်တစ်သိန်း ငွေ တစ်သိန်း ရမယ်…..
ရက်ပေါင်း သိန်း ၁၀၀ ငွေပေါင်း သိန်း ၁၀၀ …. ဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲ…
တစ်ရက် ဒဂျပ် လူဒိုင်း စုနိုင်တယ်……………….
မရှိရင်.. ရှာ… ထိုင်မနေနဲ့..။
ဖတ်ပီးမှရင်ထဲတောင်မကောင်းဘူး။ မစုမိပဲသုံးဖြစ်တာတွေအတွက်နောင်တရလို့မဆုံးပါဘူး။ စိတ်ခိုင်ခိုင် ထိန်းဖို့ကြိုးစားရအုံးမယ်။
ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲ…ဒါမှမဟုတ်…အသုံးမ၀င်တာတွေကို လျှောက်လုပ်မိတဲ့အတွက်…နောင်တအကြီးအကျယ်ရပြီဆိုရင်တော့…ဒီလိုကိစ္စလောက်က ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ရာ ဘာမှမခက်တော့ပါဘူး…။
ကျုပ်ရဲ့ ဂျီးတော်ကြီးတစ်ယောက်ကျုပ်ကိုဆုံးမခဲ့ဘူးတာလေး အမှတ်ရမိပါရဲ့
ငွေရှာတဲ့အချိန်မှာ ငွေကို မန်ကျီးပင်တစ်ပင်စိုက်သလိုသဘောထားရမယ် လို့ဆိုသဗျ
မန်ကျီးပင်ကိုအရွယ်ရောက်အောင်စိုက်ပြီးရင် အသီးကိုလည်း ရာသီတိုင်းစားရမယ်
လက်ရှိတော့ အရက်ကြွေးနည်းနည်းပါးပါးနဲ့ ဘဝကိုရုန်းကန်နေဘါဂျောင်း
တရုတ် လို ရှာ ၊
ကု လား လို စု ၊
ဗမာ လို မ ဖြုန်း နဲ့ ဆို ပါ ကလား ~~~
သများတော့ ငွေစုတာရော ရွှေစုတာပါ ၀ါသနာပါမလာခဲ့ဘူး ။
ရရ စားစားပဲ …. ရှာတာနဲ့ သုံးတာ ဆတူပဲ … ။ စိတ်ကြီးချုပ်တီးပြီး ဒုက္ခခံငွေစုတာ .. ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဘူး ။ စိတ်ထဲရှိသလို သုံးတာပဲ … ။ အဓိကက စိတ်ချမ်းသာတယ် ။
အရေးတကြီး ပိုက်ဆံ လိုရင်တော့ … အဟဲ .. ထီဆိုင်တွေမှာ ရေးထားသလိုပဲ .. အမေရှိလျှင် ငွေရှိသည်ပေါ့ ..
ဒီပို့စ်လေးက စာသားတွေက မှန်ပါတယ် …. လခထုတ်ပြီးရင် ငွေတွေလက်ထဲထားတော့ သုံးရင်းကုန်သွားတယ် …. ဒီဒေါ့ ကျွန်မက စုဗူးတစ်ခုထားတယ် …. တစ်လမှာ စုသင့်သလောက်စုတယ် … မထင်မှတ်ပဲ အပိုရလာတဲ့ငွေကို ထပ်စုတယ် …. မစုပဲ လက်ထဲများထားရင်ကုန်သွားရော … စုတော့လည်း ကုန်တာပဲ ပြီးခဲ့တဲ့လက စုဗူးထဲထည့်တာလွန်သွားတယ် ဒါနဲ့ ကိုယ်လည်း လခတွေဘယ်များရောက်ကုန်လဲ ငါဘာတွေများသုံးမိလဲ နောက်တော့မှ သတိပြန်ရတယ် စုဗူးထဲရောက်နေတော့ စိတ်ချမ်းသာတယ်လေ …. ကျွန်မကစုထားတဲ့ငွေတွေကို တစ်နှစ်တစ်ခါ သမီးလေးမွေးနေ့ကျရင် စုဗူးဖောက်တယ် အဲကငွေကို ရွှေဝယ်တယ် …. ဒါက ကျွန်မရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခု သမီးလေးကြီးလာရင် သူ့အတွက်ရွှေတွေ အများကြီးစုပြီးသားဖြစ်မယ် ….. ကိုယ်ကသူတို့ကို တကူးတက အမွေပေးစရာမလိုတော့ဘူး …. အခုတော့ နှစ်ယောက်ဖြစ်တော့ နှစ်ယောက်စာ ပိုစုရတော့မှာပေ့ါ …….
အိုက်ဒါတွေကြောင့်ပျော့စ်တာလေ .. အမေရှိလျှင် ငွေရှိပါတယ်ဆိုတာ.. ခွိခွိ …
ဂလိုချိုဒေါ့ယဲ … စကားပုံပြင်ပေးမယ်နော် … ယောက္ခမရှိလျှင်လည်း ငွေရှိပါတယ်လို့ …. အာပွားမာမီ …
မောင်ခိုင်မာ (စမ်းချောင်း) says:
ကွန်မန့်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယခုကွန်မန့်တွေကိုကြည့်ပြီး ဘယ်သူဟာ သူဌေးဖြစ်နိုင်သလဲ၊ ဘယ်သူဟာ ဒီဘ၀ ဒီဘ၀ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ အကြမ်းဖျဉ်းတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။
ပိုက်ဆံမစုပေမယ့် ထီပေါက်လို့ချမ်းသာလာရင်တော့ ကံအကျိုးပေါ့ဗျာ။ (ကျနော်မဟုတ်) စာရေး သူပြောချင်တာကစုဖို့ချည်းပဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သုံးပါ။ စုတဲ့ပိုက်ဆံဟာ များလာရင် နောက်အလုပ်တစ်ခုမှာ အရင်းအနှီးထည့်ပါ။ ဒါဆို ပိုပွားလာမယ်။ ပိုစုလာနိုင်သလို..နောက်အလုပ်တွေအလုပ်တွေ ပေါ်လာရင်လည်း ပိုထည့်ပီး ပိုပွားလာနိုင်တယ်။
ရတနာရှိရာ ရတနာလာပေ့ါဗျာ။ လူမိုက်နဲ့ငွေ အတူမနေ လို့လည်းဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။
ကျနော့်ဆရာသမား ယောက္ခမ။ လူက စည်းကမ်းရှိတော့ ချစ်တီးလို့ခေါ်ကြတယ်။ အခု နှလုံးသွေးကြောတွေ ပိတ်တယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင်သေပီလေ။ ဟော..စုထား ဆောင်းထားတယ်…
ပွားထားတော့ နိုင်ငံခြားမှာ ထွက်ကုလိုက်တယ်။ သိန်း ၁၀၀၀ လောက်ကုန်သွားတယ်။ ခုနေကောင်းနေပီ။
မစုထားလို့ကတော့ အခုဆို ဘယ်ဘ၀ရောက်နေမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ဒီလိုပဲ အသက်ကို ငွေနဲ့ဝယ်လိုက်ရတာ။ ဘယ်သူမှတော့ အသက်လောက် ငွေကိုမချစ်ဘူး။ ကျနော်ကတော့ သေလည်းအေးတာပဲ..ငွေမရှိလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ ပြန်မပြောပါနဲ့။ အရူးတောင်မတွေးပါဘူး။
ကိုခိုင်မာရေ ….. ကော့မန့်တွေ ဖတ်ပြီး … အနာဂတ်ကို အကြမ်းဖျဉ်း ခန့်မှန်းတတ်တယ်ဆိုလို့ … တကယ်ပဲ အံ့အားသင့်မိပါတယ်ရှင် ။
လူသားတွေရဲ့ စိတ်သဘောအရကိုက … ပြောတာလွယ်ပြီး လက်တွေ့ လိုက်ကျင့်သုံးဖြစ်မဖြစ် ဆိုတာ ….. တဦးတယောက်ချင်းစီအလိုက် ကွဲပြားမှုရှိပါတယ် ။ ကော့မန့်တွေကို အမှန်ရေးပြီး ၊ ရေးတဲ့အတိုင်းသာ တကယ်ကျင့်သုံးသူတွေများလျှင် သိပ်မဝေးတဲ့အနာဂတ်ထဲ…. မြန်မာသူဌေးတွေ မှိုလိုပေါက်လာမယ်ထင်ပါတယ် ။
ငယ်ငယ်ကတော့ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ ဘေဘီလုံကအချမ်းသာဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲ စာသားတွေကို သွားသတိရမိတယ်။ ဘာလဲ ၀င်ငွေရဲ့ ဆယ်ပုံပုံ တစ်ပုံကို ဆုထားပါဆိုလားပဲ…။
ဆရာတစ်ယောက် ဆုံးမတာ ကြားခဲ့ဖူးတယ်…
စုဆောင်းခြင်းသည် ချမ်းသာခြင်းအတွက် အခြေခံလမ်းစ
ချမ်းသာခြင်း အတွက် စုဆောင်းခြင်းသည် အမှန်တကယ်ပင် လိုအပ်သည် တဲ့…
စုဆောင်းရုံနဲ့ တော့ ချမ်းသာလာနိုင်မှာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်နိုင်ပေမယ့် သာမာန်ဘ၀ကနေပြီး ချမ်းသာချင်ယင်တော့ စုဆောင်းဖို့က မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်..